पिविक बनाम गुगल एनालिटिक्स: अन-प्रीमिस एनालिटिक्सको फाइदा Martech Zone
हामीसंग एक ग्राहक थियो कि हामीले पिविकलाई सिफारिस गर्यौं। तिनीहरू दुबै गुगल एनालाइटिक्स र सशुल्क उद्यमको साथ केही गम्भीर रिपोर्टिंग मुद्दाहरूमा भागिरहेका थिए विश्लेषण आगन्तुकहरूको मात्राका कारण उनीहरू आफ्नो साइटमा आएका थिए। ठूला साइटहरूले दुबै महसुस गर्दैनन् विलम्बता मुद्दाहरू र डाटा सीमा गुगल एनालिटिक्सको साथ।
क्लाइन्टसँग एकदम प्रतिभाशाली वेब समूह थियो त्यसैले लिदै विश्लेषण आन्तरिक सजिलो हुने थियो। उनीहरूको प्लेटफर्मको आधारमा अनुकूलन गर्न लचिलोपनाको साथ, मार्केटिंग समूह पनि अधिक सटिक प्रदान गरिनेछ विश्लेषण, वास्तविक समय मा, सांख्यिकीय त्रुटि बिना आधारित नमूना आगन्तुकहरु को।
यदि तपाईं गुगल एनालाइटिक्स द्वारा सीमित महसुस गर्नुहुन्छ भने, Piwik एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ प्विविक समुदाय संस्करण खुला स्रोत हो विश्लेषण उपकरण जुन नियमित अपडेट र नि: शुल्क नयाँ रिलीजको साथ आउँदछ। Piwik PRO अन-परिसर अतिरिक्त प्रीमियम सुविधाहरू र सेवाहरूको एक किसिम समावेश गर्दछ। प्विविक प्रो पनि एक प्रदान गर्दछ क्लाउड समाधान (जहाँ तपाईं अझै डाटाको स्वामित्व राख्नुहुन्छ) यदि तपाईं यसलाई आन्तरिक रूपमा होस्टिंग गर्न सक्नुहुन्न भने। प्विविकसँग पूर्ण छ प्रत्येक समाधानको तुलना तिनीहरूको साइटमा।
पूर्ण तुलना डाउनलोड गर्नुहोस्
पिविकले उनीहरूले गुगल एनालाइटिक्स मार्फत प्रस्ताव गर्ने सबै सुविधाहरूको साथ एक इन्फोग्राफिक पनि जारी गरेको छ। हो, यो पक्षपाती इन्फोग्राफिक हो। गुगल एनालिटिक्स प्रदान गर्दछ गुगल एनालिटिक्स। 360० उद्यम ग्राहकको लागि। र यो उल्लेख नगरी जानु हुँदैन कि गुगलसँग वेबमास्टर र एडवर्ड्स एकीकरणको फाइदा छ जुन फरक प्रदायकले कहिले प्रदान गर्दैन।
Piwik PRO सुविधाहरू
प्विविकले सबै मानक तथ्या reports्क रिपोर्टहरू समावेश गर्दछ: शीर्ष कुञ्जी शब्दहरू र खोज इञ्जिनहरू, वेबसाइटहरू, शीर्ष पृष्ठ URL हरू, पृष्ठ शीर्षक, प्रयोगकर्ता देशहरू, प्रदायकहरू, अपरेटि system प्रणाली, ब्राउजर बजार साझेदारी, स्क्रीन रिजोलुसन, डेस्कटप VS मोबाइल, सगाई (साइटमा समय, पृष्ठहरू प्रति पृष्ठ , दोहोर्याइएको भ्रमणहरू), शीर्ष अभियानहरू, कस्टम भ्यारीएबलहरू, शीर्ष एन्ट्री / एक्जिट पृष्ठहरू, डाउनलोड गरिएका फाईलहरू, र अधिक बढि चार मुख्य वर्गीकृत विश्लेषण रिपोर्ट कोटीहरू - आगन्तुकहरू, कार्यहरू, रेफररहरू, लक्ष्य / ई-वाणिज्य (+०+ रिपोर्टहरू)। हेर्नुहोस् पिविकको सुविधाहरूको पूर्ण सूची.
वास्तविक समय डाटा अपडेट - तपाईंको वेबसाइटको भ्रमणको वास्तविक समय प्रवाह हेर्नुहोस्। तपाईका आगन्तुकहरूको विस्तृत दृश्य पाउनुहोस्, उनीहरूले भ्रमण गरेका पृष्ठहरू र उनीहरूले ट्रिगर गरेका गोलहरू।
अनुकूलन ड्यासबोर्ड - तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी विजेट कन्फिगरेसन फिट संग नयाँ ड्यासबोर्डहरु बनाउनुहोस्।
सबै वेबसाइट ड्यासबोर्ड - एकै पटक तपाईंको सबै वेबसाइटहरूमा के हुँदैछ भनेर एक सिंहावलोकन प्राप्त गर्न उत्तम तरिका।
प Ev्क्ति विकास - कुनै पनि रिपोर्टमा कुनै प row्क्तिको लागि वर्तमान र विगत मेट्रिक डाटा।
ई-वाणिज्य को लागी एनालिटिक्स - बुझ्नुहोस् र उन्नत ई-वाणिज्य को लागी तपाईंको अनलाइन व्यवसाय को सुधार गर्नुहोस् विश्लेषण विशेषताहरु।
लक्ष्य रूपान्तरण ट्र्याकिंग - लक्ष्यहरू ट्र्याक गर्नुहोस् र पहिचान गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो वर्तमान व्यवसाय उद्देश्यहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।
घटना ट्र्याकिंग - तपाईंको वेबसाइट र अनुप्रयोगहरूमा उपयोगकर्ता द्वारा कुनै पनि कुराकानी मापन।
सामग्री ट्र्याकिंग - छवि ब्यानर, पाठ ब्यानर र तपाईंको पृष्ठहरूमा कुनै पनि तत्व को लागी छाप र क्लिक र CTR मापन गर्नुहोस्।
साइट खोज एनालिटिक्स - ट्र्याक खोजीहरू तपाईंको आन्तरिक खोज इञ्जिनमा गरियो।
अनुकूलन आयामहरू - तपाइँको आगन्तुकहरू वा कार्यहरूमा कुनै अनुकूलन डेटा असाइन गर्नुहोस् (जस्तै पृष्ठहरू, घटनाहरू, ...) र त्यसपछि प्रत्येक कस्टम आयामका लागि कति भ्रमणहरू, रूपान्तरणहरू, पृष्ठ दृश्यहरू, इत्यादि रिपोर्टहरू कल्पना गर्नुहोस्।
कस्टम भ्यारीएबल - अनुकूलन आयामहरू जस्तै: अनुकूलन नाम-मान जोडी जुन तपाईंले आफ्नो आगन्तुकहरूलाई (वा पृष्ठ हेराईहरू) जाभास्क्रिप्ट ट्र्याकिंग एपीआई प्रयोग गरेर तोक्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि प्रत्येक कस्टम भ्यारीएबलको लागि कति भ्रमणहरू, रूपान्तरणहरू आदि रिपोर्टहरू कल्पना गर्नुहोस्।
भौगोलिक स्थान - देश, क्षेत्र, शहर, संगठनको सही पत्ता लगाउन तपाईंको आगन्तुकहरू पत्ता लगाउनुहोस्। देश, क्षेत्र, शहर द्वारा विश्व नक्शामा आगन्तुकहरूको तथ्या .्क हेर्नुहोस्। वास्तविक समयमा तपाईंको भर्खरको आगन्तुकहरू हेर्नुहोस्।
पृष्ठ संक्रमण - विशिष्ट पृष्ठ हेर्नु अघि र पछि आगन्तुकहरूले के गरे हेर्नुहोस्।
पृष्ठ ओभरले - हाम्रो स्मार्ट ओवरलेको साथ सीधा तपाईंको वेबसाइटको शीर्षमा तथ्या .्कहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्।
साइट र पृष्ठ गति रिपोर्टहरू - तपाइँको वेबसाइटले तपाइँको आगन्तुकलाई सामग्री वितरण कती छिटो ट्र्याक राख्दछ।
बिभिन्न उपयोगकर्ता अन्तरक्रिया ट्र्याक गर्नुहोस् - फाईल डाउनलोडहरूको स्वचालित ट्र्याकिंग, बाह्य वेबसाइट लिंकहरूमा क्लिकहरू, र 404०XNUMX पृष्ठहरूको वैकल्पिक ट्र्याकिंग।
एनालिटिक्स अभियान ट्र्याकिंग - स्वचालित रूपमा तपाइँको URL मा Google एनालिटिक्स अभियान प्यारामिटरहरू पत्ता लगाउँदछ।
खोज इन्जिनबाट ट्राफिक ट्र्याक गर्नुहोस् - 800०० भन्दा बढी बिभिन्न खोज इञ्जिनहरू ट्र्याक गरियो!
तालिकाबद्ध ईमेल रिपोर्टहरू (PDF र HTML रिपोर्टहरू) - तपाईंको अनुप्रयोग वा वेबसाइटमा रिपोर्ट इम्बेड गर्नुहोस् (+०+ विजेटहरू उपलब्ध छन्) वा कुनै अनुकूलन पृष्ठ, ईमेल, वा अनुप्रयोगमा पीएनजी ग्राफहरू इम्बेड गर्नुहोस्।
एनोटेसनहरू - विशेष घटनाहरूका बारे सम्झनको लागि तपाईंको ग्राफमा पाठ नोटहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
कुनै डाटा सीमा छैन - तपाईका सबै डेटा राख्न सक्नुहुनेछ, कुनै भण्डारण सीमा बिना नै, सँधै!
एकीकरण - than० भन्दा बढी CMS, वेब फ्रेमवर्क वा Ecommerce पसलहरूको साथ
मोबाइल अनुप्रयोग एनालिटिक्स Piwik iOS SDK, Android SDK, र टाइटेनियम मोड्युलको साथ।
टैग: गुगल एनालिटिक्स को विकल्पएनालिटिक्स एपीआईविश्लेषण डेटाविश्लेषणात्मक सीमाहरूहोस्ट गरिएको एनालिटिक्समा आधारभूत विश्लेषणPiwikpiwik बादलpiwik समुदायpiwik प्रोpiwik vs gapiwik बनाम गुगल एनालिटिक्सpiwik बनाम gapiwik vs Google विश्लेषकहरूवास्तविक समय एनालिटिक्ससेतो लेबल एनालिटिक्स
गुणवत्ता सामग्रीको साथ दिगो ग्राहक सम्बन्ध निर्माण गर्नुहोस्